Hawd Oo Ka Hadhay Tartanka Goboladda Iyo Rabshadii Taageerayaasha
HomeWararka MaantaHawd Oo Ka Hadhay Tartanka Goboladda Iyo Rabshadii Taageerayaasha
Xulka gobolka Hawd ayaa ka hadhay tartanka goboladda Jamhuuriyadda Somaliland, kadib markii xulka gobolka Daad-madheedh 2-1 kaga guuleystay, ciyaartii saddexaad ee heerka Groups ka oo rajadoodu ku xidhnayd, taageerayaasha gobolka hadhay ayaa rabshado garoonka ku asqeeyey markii ciyaartu dhamaatay.
Taageerayaasha xulka Hawd ayaa rabshado dhigay kadib dhamaadkii ciyaartii, waxaanay ciidamada ammaanka garoonka Hargeysa Stadium sugayay, u adeegsadeen qiiqa dadka ka ilmaysiiya, si ay u kala kaxeeyaan.
Daad-madheedh iyo gobolka Gabilay oo hore isagu 7 dhibcood u sii haystay ayaa ka baxay Group B, waxaana sidaas ku hadhay xulalka goboladda , Hawd iyo Sool.
Ciyaartii go’aaminaysay cida Gebilay ku wehelinaysa Group B, afar dhamaadka tartanka Gobolada Somaliland, ayaa waxay ku dhex martay garoonka Hargeysa Stadium, maanta oo Isniin ah, waxaanay aakhirkii saddexdii dhibcood ku qaatay – Daad-madheedh.
Rabshadaha Taageerayaashu Dhigeen, shiidka iyo Tuuryada walxaha kale, ayaa la soo werinayaa in ciidamada ammaanka oo rasaas nool adeegsaday markii dambe, ay sabbabtay dhaawac aan la ogayn ilaa hadda inta uu tiro le’eg yahay.
Xulalka gobolada, Saaxil iyo Awdal ayaa Group ka A, kaalinta koobaad iyo labaad ugu soo baxay siday u kala horeeyaan, waxaana soo raacay Group B, oo ay Gabilay oo kaalinta koobaad ku baxday ay soo labaysay Daad-madheedh oo guushan ku heshay lix dhibcood.
Ciyaaraha Semi finalka, Saaxil oo kaalinta koobaad ee Group A ku baxday, waxay wajahi doontaa xulka Daad Madheedh oo labaad Group B ku baxay, halka Gabiley oo koobaad Group A ku baxday ay ku dhacday Gobolka Awdal.
Ciyaaraha Semi Finalka
Click Sii Sawirka Si Aad u Muuqaal Weyn Uga Bogato
Robben wali furre ayuu u yahay Bayern – Guardiola
Wakhtiga ciyaaraha Maanta Iyo Caawa
14/05/2016 Abdiwahab Ahmed
Arsenal 1-1 Southampton – All Goals and Highlights